गणेश भगवानको पुजा गर्दा यि कुराहरु ध्यन दिएर गर्नुहोस, मिल्नेछ शुभ लाभ !! – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /Intresting/गणेश भगवानको पुजा गर्दा यि कुराहरु ध्यन दिएर गर्नुहोस, मिल्नेछ शुभ लाभ !!
१. गणेश भगवानको फोटो वा मूर्ती तयार पार्नुहोस,२. गणेश मन्दीरर्मै जानुहून्छ भने तिलको लड्डु तयार गर्नुहोस,३. स्नान गरी चोखो ,सफा सुग्घर बन्नुहोस,४. पुजाको लागी आवश्यक सफा जल,जौँ तिल फुल र अक्षता एकैठाउँमा संग्रह गर्नुहोस
१. सुरुमा मूर्ती अथवा फोटोको अगाडि पवित्र मनले दियो जलाईदिनुहोस,२. दियो जलाईसकेपछी भगवानलाई मनपर्ने तिलको गुलियो लड्डु चढाईदिनुहोस,३. महिला भक्तजन भएमा आफ्नो सारी अर्थात सलले पुजा समयमा आफ्नो शिर छोप्नुहोला४. अब अगरबत्ती जलाई त्यसलाई हातमा लिएर गणेश भगवानलाई विभिन्न सुगन्ध सहित पुजा आराधना गर्नुहोस,५. फूल अक्षता साथै पातिहरु अगरबत्ती बालेर आराधना गरीसकेपछी चढाईदिएर पुजा गर्नुहोस,
६ .गणेश मन्त्र उच्चारण माथि पहिलो चरणबाटै गर्नुपर्नेछ अब मन्त्र उच्चारण गर्दै गणेश भक्ती गाईरहनुहोस७. तपाँईको मनमा गणेश भगवान भएको कल्पना गर्नुहोस,आखाँ बन्द गरेर गणेश भगवान आफुसंगै भएको महसुस गर्नुहोस,८. गणेश भगवानसंग बोल्नुहोस ,केहि इच्छीत कुरा भए माग्नुहोस ,र तपाँई उहाको भक्त भएको भान गराउनुहोस,९. भगवानको शिरमा टिका लगाईदिई आफुपनी लगाउनुहोस र अरुलाईपनी लगाईदिनुहोस,१०. सम्पूर्ण भक्तजन साथै स्वयम् आफैले प्रसाद लिनुहोस ,खुवाउनुहोस
माथि उल्लेखीत विधि अपनाएर गणेशको पुजा गर्दा पक्कै कार्यसिद्दी हुनुका साथै तँपाईले जिवनमा सोचेका सबै कुरा पुरा हुनमा सहयोग पुग्नेछ तपाँई हामी पनी आज मंगलबार कार्यसिद्दी विनायक गणेश भगवानको पुजा आराधना गरौ ।